Umnyango uzophenya ngokusha kwesikole iNsika | News24
Umnyango uzophenya ngokusha kwesikole iNsika
isithombe: sithunyelweSisale sinje isikole samabanga aphakeme iNsika High School ngemuva kokusha ngoLwesihlanu.
AKUKACACI namanje ukuthi kungabe yini eholele ekutheni kushiswe isikole samabanga aphakeme iNsika High School endaweni yaKwaMpumuza.
Lesi sikole kuse ngoLwesihlanu ekuseni mhla zingama-26 kuNtulikazi (July) sivutha amalangabi kanti namanje bekungakaziwa ukuthi kungani sishisiwe.
Ngokuthola kwe-Echo kulesi sikole kushe ihholo eligcina impahla yesikole kanye namagumbi amathathu kwayisikhombisa ashe angqongqa. UNgqongqoshe wezeMfundo esifundazweni saKwaZulu-Natal uMnu Kwazi Mshengu uthe ufuna ukuthi kuphenywe kabanzi ngalomlilo owenzeke kulesi sikole.
UMnu Mshengu uthe izindaba zokusha kwalesi sikole kuyinto ethusayo wathi bazosebenzisana nesikole kanye nomphakathi ukuthola ukuthi kungabe ungakanani umonakalo odalekile.
“Siphoxeke kakhulu ukusho nje. Sinenhlanhla ukuthi akekho umuntu olimele. Kulezi zinsuku ezizayo sizothola ukuthi kungabe yini eqale umlilo. Kuzokwenziwa uphenyo oluphuthumayo ukuthola ukuthi kungabe yini eqale umlilo,” kubeka yena.
UMnu Mshengu uphinde waveza ukuthi ngaphandle kokusha kwala magumbi kuphinde kwagqekezwa ihhovisi likathishanhloko ngenhloso yokuzama ukungena egumbini elaziwa ngokuthi i-strong room nokuyigumbi eligcina ama-laptop kanye namakhompyutha. Kodwa, uthe konke lokhu akuzange kuphumelele njengoba kugcine kungazange kube khona lutho oluntshontshiwe.
“Yonke imizamo isiyenziwe ukuthi ukufunda kanye nokufundisa kubuyele esimeni esijwayelekile ngokukhulu ukushesha, ngemuva kokuphazamiseka okuncane. Sizophinde sisebenze ngaphansi kokugadwa abantu bezimo eziphuthumayo.”
Ngesikhathi i-Echo ifika kulesi sikole ngoMsombuluko intuthu ibisashunqa iphuma kulamagumbi ashile kodwa ukufunda bekubukeka engathi sekubuyele esimeni esejwayelekile. Ikhansela laku lendawo uMnu Sbusiso Mtshali uthe basathukile ngalesi senzo.
Uthe akukona okokuqala ukuthi kushiwe isikole kulendawo.
“Eminyakeni eyedlule kwaqala kwasha isikole iMbubu Primary, muva nje kusanda kushiswa esikoleni uMsimude Secondary manje sekwenzeka loku eNsika. Siphatheke kabi kakhulu ngoba lesi isikole sezingane zethu endaweni. Uma ngabe sesishiswa kuthiwa izingane zizofundaphi? Siyafisa ukuthi sengathi kungatholakala abantu abenze loku uma ngabe kungukuthi kwenziwe abantu, “ kubeka yena.
Omakhelwane abakhelene nesikole abakhulume ne-Echo bathe nabo abazi ukuthi kungabe yini eyaqala umlilo. Bathe babona ngentuku enkulu kanye namalangabi kugqamuka phezulu bathi uma bebheka bathola ukuthi kusha isikole.
“ Sibuhlungu kakhulu kanti futhi sisethukile nje ukuthi kungavele kushe isikole esikhaleni kade kungekho lutho. Siyathemba ukuthi loku akuzukuphazamisa kakhulunukufunda esikoleni ikakhulukazi ngoba sekusondele isikhathi sezivivinyo zikamatikuletsheni zokuphela konyaka, “ kusho elinye ilunga lomphalathi elingathanda ukudalula igama lalo.